ရထားလမ်းစနစ် RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ဆမ်ဆန်မြို့ပြမြူနီစီပယ်SAMULAŞသည်ရထားပို့ဆောင်ရေးစနစ်အားလုံး၏အသင်း (TÜRSİD) ၏ယာဉ်လည်ပတ်မှုကော်မရှင်၏ဆမ်ဆန်အစည်းအဝေးကိုလက်ခံကျင်းပခဲ့သည်။ ရထားလမ်းစနစ်လည်ပတ်နေသောမြူနီစီပယ်ကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်သည့်အစည်းအဝေးတွင်သတင်းနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေခဲ့သည်။ mastiff [ပို ... ]
Marmara Marmara ၏အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေမှုများရှိဆဲပြည်ထောင်စုကစီစဉ်အောက်တိုဘာလအကြား Sakarya မြို့တော်ဝန် Ekrem Yüce 1-3 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြို့ပြဖိုရမ်ပါဝင်ခဲ့။ '' သမ္မတတိုက်တွန်း: အတူတကွစဉ်းစား, အတူတကွခေတ္တ '' တစ်ဦး session ကိုသမ္မတ [ပို ... ]
ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အယ်လ် "ဟုအဆိုပါရထားလမ်းစနစ်ကယနေ့ဘာသာရပ်မဟုတ်ပါဘူး" ဟုသူကဒီကဗျာမက်ဆေ့ခ်ျကို ပေး. , ကဆိုသည်။ Aksoy, ဒေသခံအစိုးရ "ဟုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများထက်တောင်ပိုင်းအမြန်လမ်းမကြီးအဖြစ်စီးတီးဆေးရုံ-ရထားလမ်းစနစ်ကလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်" ဟုသူကအကြံပြုသည်။ Trabzon [ပို ... ]
ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ Sakarya အတွက်ခရီးသွားအတွက်နယူးအောင်မြင်မှုများသည် Begin
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဥက္ကဋ္ဌ Ekrem Yüceအဆိုပါ DCC အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်ဗျူရိုကရက်, "နယူးနှစ်ဆလမ်းများ, စမတ်လမ်းဆုံ, signal စနစ်များ, စက်ဘီးလမ်းကြောင်း, ထိုကဲ့သို့သောရထားလမ်းနှင့်မြို့ကျယ်ပြန့်အဖြစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အသစ်အဝင်ပေါက်တံခါးများအတွက်စုဝေးရောက်လာကြ၏ [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ဆောက်လုပ်ဆဲ 221,7 ကီလိုမီတာရထားလမ်းပြီးစီးသောအခါ, တည်ဆဲရထားလမ်းအရှည်ကီလိုမီတာအပိုင်းနှင့်အတူမြို့ 233,05 454,75 ကီလိုမီတာရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကိုအစ္စတန်ဘူလ်လျှော့ချဖို့ရထားလမ်းစနစ်၏အရေးပါမှု [ပို ... ]
Dirinler စက်, 1 Mills က Wagon နေ့ထုတ်လုပ်တီထွင်
İzmir’de 1952 yılından bu yana bünyesinde yer alan4fabrikasında takım tezgahı ve pres imalatı yapan Dirinler, geleneğini bozmadı İzmir’de 1952 yılından bu yana bünyesinde yer alan4fabrikasında takım [ပို ... ]
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ရရှိထားသည့်စီးပွားရေးဆုံးဖြတ်ချက်မှ Kayseri ပံ့ပိုးပေးခြင်းအတွက်ထိန်းသိမ်းထား
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 Mayıs’tan itibaren başlayan toplu ulaşımla ilgili uygulamaların bir haftada 11 bin 100 litre yakıt tasarrufu ve trafikte rahatlama sağladığını belirtti. Kayseri Büyükşehir [ပို ... ]
Batmansonsöz Gazetesini ziyaret eden Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Diyarbakır Şube Başkanı Nusret Basmacı ve Batman Şube Başkanı Adnan İnci, Batman-Diyarbakır yolundaki tren hattının raybüse dönüştürülmesi yönünde yürütülen imza kampanyasına [ပို ... ]